Retina AI: Mampiasa AI Predictive hanatsarana ny fanentanana ara-barotra sy hananganana ny sandan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany (CLV) | Martech Zone
Miova haingana ny tontolo iainana ho an'ny mpivarotra. Miaraka amin'ny fanavaozana iOS vaovao mifantoka amin'ny fiainana manokana avy amin'ny Apple sy Chrome manafoana ny cookies an'ny antoko fahatelo amin'ny 2023 - ankoatry ny fiovana hafa - ny mpivarotra dia tsy maintsy mampifanaraka ny lalaony hifanaraka amin'ny fitsipika vaovao. Ny iray amin'ireo fiovana lehibe dia ny fitomboan'ny sanda hita ao amin'ny angona an'ny antoko voalohany. Ny marika dia tsy maintsy miantehitra amin'ny angon-drakitra fidirana sy an'ny antoko voalohany mba hanampiana amin'ny fanentanana fanentanana.
Inona no atao hoe Customer Lifetime Value (CLV)?
Vidin'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany (CLV) dia metrika manombatombana ny sandany (matetika ny vola miditra na ny tombom-barotra) ho entin'ny mpanjifa iray amin'ny orinasa iray mandritra ny fitambaran'ny fotoana hifandraisany amin'ny marikao — taloha, ankehitriny ary ho avy.
Ireo fiovana ireo dia mahatonga ny orinasa tsy maintsy mahatakatra sy maminavina ny lanjan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany, izay manampy azy ireo hamantatra ireo ampahany manan-danja amin'ny mpanjifa ho an'ny marika alohan'ny hividianana azy ary hanatsara ny paikady ara-barotra mba hifaninana sy hiroborobo.
Tsy ny modely CLV rehetra no noforonina mitovy, na izany aza - ny ankamaroany dia miteraka izany amin'ny fitambarana fa tsy amin'ny ambaratonga tsirairay, noho izany, dia tsy afaka maminavina tsara ny CLV ho avy. Miaraka amin'ny CLV isam-batan'olona izay ateraky ny Retina, ny mpanjifa dia afaka maneso ny zavatra mampiavaka ny mpanjifany tsara indrindra amin'ny olon-drehetra ary mampiditra izany fampahalalana izany mba hampitomboana ny tombom-barotra amin'ny fampielezan-kevitry ny fividianana mpanjifa manaraka. Fanampin'izany, ny Retina dia afaka manome vinavina CLV mavitrika mifototra amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa taloha tamin'ny marika, ahafahan'ny mpanjifa mahafantatra izay mpanjifa tokony hokendrena amin'ny tolotra manokana, fihenam-bidy ary fampiroboroboana.
Inona ny Retina AI?
Retina AI dia mampiasa faharanitan-tsaina artifisialy mba haminavina ny sandan'ny androm-piainan'ny mpanjifa alohan'ny fifanakalozana voalohany.
Retina AI no hany vokatra maminavina ny CLV maharitra ho an'ny mpanjifa vaovao ahafahan'ny mpivarotra fitomboana mandray fanapahan-kevitra momba ny fanatsarana ny tetibola amin'ny fotoana tena izy. Ohatra iray amin'ny sehatra Retina ampiasaina ny asantsika miaraka amin'i Madison Reed izay nitady vahaolana amin'ny fotoana tena izy handrefesana sy hanatsarana ny fanentanana ao amin'ny Facebook. Ny ekipa tao dia nisafidy ny hanao fitsapana A/B mifototra amin'ny CLV:CAC (vidin'ny fahazoana mpanjifa) tahan'ny.
Fandinihana tranga Madison Reed
Miaraka amin'ny fanentanana andrana ao amin'ny Facebook, i Madison Reed dia nikendry ny hanatratra ireto tanjona manaraka ireto: Mandrefy ny fampielezan-kevitra ROAS sy CLV ao anatin'ny fotoana tena izy, avereno amboarina ny teti-bola ho amin'ny fampielezan-kevitra mahasoa kokoa ary fantaro hoe iza amin'ireo famoronana doka no nahatonga ny tahan'ny CLV:CAC ambony indrindra.
Nanangana fitsapana A/B i Madison Reed tamin'ny fampiasana mpihaino kendrena mitovy amin'ny fizarana roa: vehivavy 25 taona no ho miakatra any Etazonia izay mbola tsy mpanjifa Madison Reed.
Ny fampielezan-kevitra A dia ny fanentanana ara-barotra toy ny mahazatra.
Ny fanentanana B dia novaina ho fizarana fitsapana.
Amin'ny fampiasana ny sandan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany, ny fizarana fitsapana dia natao tsara ho an'ny fividianana ary ratsy ho an'ireo tsy misoratra anarana. Nampiasa famoronana doka mitovy ny fizarana roa.
Madison Reed dia nanao ny fitsapana tao amin'ny Facebook tamin'ny fizarana 50/50 nandritra ny 4 herinandro tsy nisy fiovana teo antenatenan'ny fampielezan-kevitra. Ny tahan'ny CLV:CAC nitombo 5% avy hatrany, ho vokatra mivantana amin'ny fanatsarana ny fampielezan-kevitra amin'ny fampiasana ny sandan'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany ao anatin'ny mpitantana ny doka Facebook. Miaraka amin'ny tahan'ny CLV:CAC tsara kokoa, ny fanentanana andrana dia nahazo fahatsapana bebe kokoa, fividianana tranokala bebe kokoa ary famandrihana bebe kokoa, izay nitarika ho amin'ny fitomboan'ny fidiram-bola. Madison Reed dia nitahiry ny vidin'ny fahatsapana sy ny vidin'ny fividianana ary koa ny fahazoana mpanjifa maharitra kokoa.
Ireo karazana vokatra ireo dia mahazatra rehefa mampiasa Retina. Amin'ny ankapobeny, ny Retina dia mampitombo ny fahombiazan'ny varotra amin'ny 30%, mampiakatra CLV incremental amin'ny 44% amin'ny mpihaino mitovy, ary mahazo fiverenana 8x amin'ny fandaniana doka (ROAS) amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fividianana raha ampitahaina amin'ny fomba ara-barotra mahazatra. Ny personalization mifototra amin'ny sandan'ny mpanjifa voavinavina amin'ny ambaratonga amin'ny fotoana tena izy dia ny fanovana lalao amin'ny teknolojia marketing. Ny fifantohana amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa fa tsy ny demografika dia mahatonga azy io ho fampiasana angon-drakitra tokana sy intuitive mba hamadihana ny fanentanana ara-barotra ho fandresena mahomby sy tsy miovaova.
Retina AI dia manolotra ireto fahaiza-manao manaraka ireto
CLV Lead Scores - Retina dia manome ny orinasa ny fomba hamantarana ny mpanjifa rehetra hamantarana ny fitarihana kalitao. Orinasa maro no tsy mahazo antoka hoe iza no mpanjifa hanome sanda ambony indrindra mandritra ny androm-piainany. Amin'ny fampiasana ny Retina handrefesana ny fiverenan'ny salan'isa amin'ny fandaniana amin'ny dokambarotra (ROAS) amin'ny fampielezan-kevitra rehetra sy ny fanaovana naoty tsy tapaka ary ny fanavaozana ny CPA mifanaraka amin'izany, ny faminanian'i Retina dia miteraka ROAS ambony kokoa amin'ny fanentanana izay nohatsaraina tamin'ny fampiasana eCLV. Ity fampiasana stratejika ny faharanitan-tsaina artifisialy ity dia manome ny orinasa ny fomba hamantarana sy hidirana amin'ny mpanjifa izay manondro ny sanda sisa. Ankoatra ny fanamarihan'ny mpanjifa, ny Retina dia afaka mampiditra sy mizara angon-drakitra amin'ny alàlan'ny sehatra angon-drakitra mpanjifa ho an'ny tatitra manerana ny rafitra.
Fanatsarana ny tetibola fanentanana - Ny mpivarotra stratejika dia mitady fomba hanatsarana ny fandaniana amin'ny doka. Ny olana dia ny ankamaroan'ny mpivarotra dia tsy maintsy miandry hatramin'ny 90 andro vao afaka mandrefy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra teo aloha ary manitsy ny tetibola ho avy mifanaraka amin'izany. Retina Early CLV dia manome hery ny mpivarotra hanao safidy marani-tsaina momba ny toerana hampifantohana ny fandaniana amin'ny doka amin'ny fotoana tena izy, amin'ny alàlan'ny famandrihana ny CPA avo indrindra ho an'ny mpanjifa sy ny hoavy sarobidy. Izany dia manatsara haingana ny CPA kendrena amin'ny fampielezan-kevitra ambony kokoa mba hahazoana ROAS ambony sy tahan'ny fiovam-po ambony kokoa.
Lookalike Audiences – Retina dia tsikaritray fa orinasa maro no manana ROAS ambany dia ambany—matetika eo amin'ny 1 na latsaky ny 1. Matetika no mitranga izany rehefa tsy mifandanja amin'ny sandan'ny androm-piainan'ny mpanjifany na ny mpanjifany ny fandaniana doka iray. Ny fomba iray hampitomboana ny ROAS dia ny famoronana mpihaino mitovitovy amin'ny sandany ary mametraka fetran'ny tolo-bidy mifanaraka amin'izany. Amin'izany fomba izany, ny orinasa dia afaka manatsara ny fandaniana doka mifototra amin'ny sandan'ny mpanjifany ho azy ireo amin'ny fotoana maharitra. Azon'ny orinasa atao avo telo heny ny fiverenany amin'ny fandaniana doka miaraka amin'ireo mpihaino mitovitovy amin'ny vidin'ny mpanjifa mandritra ny androm-piainany.
Tolotra mifototra amin'ny sanda – Ny tolo-bidy mifototra amin'ny sanda dia mifototra amin'ny hevitra fa na dia ny mpanjifa ambany sanda aza dia mendrika ny hahazo一raha mbola tsy mandany vola be amin'ny fahazoana azy ireo ianao. Miaraka amin'io fiheverana io, ny Retina dia manampy ny mpanjifa hampihatra ny tolo-bidy mifototra amin'ny sanda (VBB) amin'ny fampielezan-keviny Google sy Facebook. Ny fametrahana satroboninahitry ny tolo-bidy dia afaka manampy amin'ny fiantohana ny tahan'ny LTV:CAC avo lenta ary manome fahafaham-po kokoa ny mpanjifa hanova ny mari-pamantarana fanentanana hifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa. Miaraka amin'ny fametahana tolo-bidy mavitrika avy amin'ny Retina, ny mpanjifa dia nanatsara be ny LTV: CAC ratios amin'ny fitazonana ny vidin'ny fividianana eo ambanin'ny 60% amin'ny fetran'ny tolo-bidy.
Fahasalamana ara-bola & mpanjifa - Tatitra momba ny fahasalamana sy ny lanjan'ny mpanjifanao. Quality of Customers Report™ (QoC) dia manome famakafakana amin'ny antsipiriany momba ny fototry ny mpanjifan'ny orinasa iray. Ny QoC dia mifantoka amin'ny metrikan'ny mpanjifa mibanjina sy ny kaonty momba ny fitovian'ny mpanjifa naorina tamin'ny fitondran-tena miverimberina.
Manomàna antso hianarana bebe kokoa
Tags: ab testingaifahaizana artifisialyCACfanatsarana ny tetibolaclv mitarika isafahasalaman’ny mpanjifasandan'ny androm-piainan'ny mpanjifaMpitantana doka Facebookscoring firakaMadison reedmaminavina clvretina aitolo-bidy mifototra amin'ny sanda
Emad no tale jeneralin'ny orinasa sy mpiara-manorina ny Retina AI. Hatramin'ny taona 2017 Retina dia niara-niasa tamin'ny mpanjifa toa an'i Nestle, Dollar Shave Club, Madison Reed, sy ny maro hafa. Talohan'ny nidirany tamin'ny Retina dia nanangana sy nitantana ekipa analyse tao amin'ny Facebook sy PayPal i Emad. Ny fitohizany sy ny traikefany tao anatin'ny indostrian'ny teknolojia dia nahafahan'izy ireo nanangana vokatra manampy ireo fikambanana handray fanapahan-kevitra tsara kokoa momba ny fandraharahana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny angon-drakitr'izy ireo manokana. Emad dia nahazo mari-pahaizana BS amin'ny Injeniera elektrônika avy amin'ny Penn State, Masters of Engineering Electrical avy amin'ny Rensselaer Polytechnic Institute, ary MBA avy amin'ny UCLA Anderson School of Management. Ankoatra ny asany miaraka amin'ny Retina AI, dia bilaogera izy, mpandahateny, mpanolotsaina fanombohana, ary adventurist ivelany.